Ndụmọdụ 5 iji bulie ọnụego mgbanwe mgbasa ozi vidiyo | Martech Zone
Ndụmọdụ 5 iji bulie ọnụego mgbanwe mgbasa ozi vidiyo gị
Na Mọnde, Nọmba 30, 2021 Na Mọnde, Nọmba 30, 2021 Daniel Salikov
Ọ bụrụ mmalite ma ọ bụ azụmaahịa na-ajụkarị, ndị ọchụnta ego niile na-atụ anya iji usoro azụmaahịa dijitalụ gbasaa ahịa ha. Ịre ahịa dijitalụ gụnyere njikarịcha search engine, mgbasa ozi mgbasa ozi ọha, ahịa email, wdg.
Inweta ndị ahịa nwere ike ịnweta na inwe nleta ndị ahịa kacha kwa ụbọchị dabere n'otú i si azụ ahịa ngwaahịa gị yana otu esi agbasa ha. Mgbasa ozi nke ngwaahịa gị dabere na ngalaba mgbasa ozi mgbasa ozi ọha. Ị na-eme ihe omume dị iche iche dị ka ikesa onyonyo na ederede, bulite vidiyo, na ịgbakwunye ọdịnaya okike iji kwalite ntinye aka ndị na-ege ntị.
N'etiti ndị a niile azum, inwe mgbasa ozi vidiyo na-arụ ọrụ kacha mma n'ahịa ngwaahịa na iru ndị na-ege ntị kacha. Ya mere, ịre ahịa vidiyo bụ ngwá ọrụ dị ike n'ịntanetị nke na-ere ọrụ ma na-ewuli ụdị gị.
Na 2021, mmefu mgbasa ozi vidiyo dijitalụ na United States bụ ijeri dollar 55.34 na isi mmalite ahụ kwuru na mmefu ga-abawanye ruo ijeri 78.5 na njedebe nke 2023. Mkpokọta mgbasa ozi dijitalụ na US ga-abawanye site na 191 ruo 250. ijeri dollar US n'otu oge ahụ.
Ọzọkwa, iji mee ka atụmatụ mgbasa ozi gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị, tinye ego na ihe nkiri vidiyo. Vidiyo na-emegharị anya na-akpali ndị ọrụ nlebara anya mbanye atụmanya ịtụgharị. Ime vidiyo na-adọrọ adọrọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka ka ị nwee ike were ọrụ mmepụta vidiyo na ihe ngosi iji nyere aka.
Kedu ihe bụ Mgbasa ozi vidiyo?
Mgbasa ozi vidiyo n'ịntanetị ma ọ bụ mgbasa ozi vidiyo bụ mgbasa ozi n'ịntanetị kachasị dị irè ugbu a. Ọdịnaya nkwado na nyiwe mgbasa ozi ọha na-egwu tupu, n'oge, ma ọ bụ mgbe agbasa ọdịnaya. Ụfọdụ ndị ọkachamara n'ịre ahịa mgbasa ozi na-agbatị nkọwa mgbasa ozi vidiyo ka ịgụnye mgbasa ozi ngosi nwere ọdịnaya vidiyo, dị ka ndị na-amalite ịkpọ vidiyo mgbe mmadụ na-etinye cursor nke òké n'elu ha yana mgbasa ozi vidiyo nke obodo na-akwalite na netwọk mgbasa ozi dijitalụ.
Nke a bụ ọmụmaatụ nke obere mgbasa ozi vidiyo anyị mepụtara:
Obi abụọ adịghị ya na mgbasa ozi vidiyo bụ otu n'ime ụzọ kachasị ewu ewu iji zụlite azụmahịa gị na iru ndị na-ege ntị n'ịntanetị. Ndị ọkachamara na-atụ anya ma kwenye na mgbasa ozi vidiyo ga-achịkwa afọ iri na-abịa, na-atụ aro na ugbu a bụ oge dị mma maka ndị ọkachamara na-ere ahịa iji gbasaa ihe ọmụma ha na ngalaba a. Ọzọkwa, ha kwesịrị inyocha ka ha ga-esi meziwanye iru ha na arụmọrụ n'ozuzu ya na mkpọsa dị iche iche.
Site na ịgbakwunye akụkọ na-adọrọ adọrọ na itinye ihe onyonyo dị ike, ebe a bụ ndụmọdụ mgbasa ozi vidiyo 5 mara mma nke ga-eme ka ọnụego mgbanwe gị dị elu site na ire vidiyo.
Ndụmọdụ ị ga-agbaso mgbe ị na-agbakwunye mgbasa ozi vidiyo
Maka ire ahịa vidiyo dị irè na ọnụ ọgụgụ ntụgharị dị elu, ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na aghụghọ na usoro okike iji tụlee. Mgbasa ozi gị ga-abụrịrị na-egosipụta nsogbu nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ika gị nwere ike idozi, jiri ezigbo ederede maka atụmatụ vidiyo, wee họrọ ikpo okwu ziri ezi. Nke a bụ ndụmọdụ 5 maka mgbasa ozi vidiyo na-eweta mgbanwe.
Mee ka mmalite mgbasa ozi vidiyo gị bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ma mee ka akara gị pụta ìhè
Inweta echiche maka mgbasa ozi vidiyo gị ezughị iji weta mgbanwe n'ihi na mmalite nke vidiyo gị dị mkpa karị. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ndị na-ekiri ha wụpụ mgbasa ozi ma ọ bụ pịa pụọ, ị ga-aṅa ntị na mmalite nke mgbasa ozi iji mee ka elekere ole na ole mbụ mara wee gụọ.
Iji jikọta ndị na-ege gị ntị, mee ntakịrị mgbalị wee malite vidiyo gị site na nkwupụta na-adọrọ mmasị site n'ịkwado ụfọdụ nsogbu nkịtị, ịjụ ajụjụ dị mkpa, ma ọ bụ tinye ihe na-adọrọ mmasị na-eme ka akara gị pụta ìhè.
Ndị nwe azụmaahịa niile chọrọ ka ndị ahịa hụ mgbasa ozi n'ikpeazụ; ọ bụrụ na ha ahapụ ya na etiti oge, enwere ohere dị nta maka ire ahịa gị ibuli elu. Ya mere, malite mgbasa ozi vidiyo gị site na iji ọmarịcha anya, ma tinye foto kwesịrị ekwesị na ederede doro anya.
Jide n'aka na ika ahụ pụta ìhè ma nwee ike ịkpalite mmasị nke ndị ahịa ngwa ngwa. Maka ebumnuche a, ị ga-agwarịrị ndị ahịa ihe kpatara akara gị ji dị mma yana otu ọrụ gị si enye uru. Ndị mmadụ na-atụ anya ihe niile site na ogo ngwaahịa na nkwado ndị ahịa, yabụ mgbasa ozi gị ga-emesi ike ihe kpatara ya ụlọ ọrụ gị pụrụ iche na a pụrụ ịdabere na ya.
Ihe akaebe ọha na eze dị mkpa na mgbasa ozi vidiyo
Ndụmọdụ ọzọ ị ga-elekwasị anya mgbe ị na-eme mmepụta vidiyo bụ ihe akaebe ọha na eze. Ọ bụ ihe mgbasa ozi mgbasa ozi ọha mmadụ na-elegharakarị anya. Dị ka anyị maara na enwere asọmpi dị ukwuu na ụwa dijitalụ, yabụ ịkwesịrị ịga n'ihu na karịa iji kpalie ndị ahịa gị na ị na-enye ọrụ dị mma n'ịntanetị ha nwere ike ịtụkwasị obi. Ka o sina dị, ọ dịghị mfe ịgba ọsọ n'otu oghere na ọtụtụ ndị asọmpi.
Ndị nwe ụlọ ahịa niile ga-etinyerịrị ihe ndị a mmepụta vidiyo atụmatụ ịhụ ika ha na-eru ọkwa dị elu. N'okwu a, iwulite ntụkwasị obi kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa. Ewezuga ihe a, ọ ga-esi ike ikwere ihe ị na-agwa ndị na-ege gị ntị.
Ha nwere ike inwe obi abụọ, ọkachasị mgbe ọ bụ mgbasa ozi kachasị elu ebe gị na ndị na-ahụbeghị ika gị na-akpakọrịta. Yabụ, iji tinye ihe akaebe ọha na eze na ahịa vidiyo, ị nwere ike iji akaebe, nyocha, baajị kpakpando na ọdịnaya sitere na onye ọrụ.
Akaebe na-enyere aka wepụ okwu ndị a n'ọnụ onye ahịa gị wee kesaa ihe ndị ahụ n'ụwa. Nlebanya ma ọ bụ nzaghachi ndị ahịa na-akọwa ahụmịhe niile yana otu ọrụ gị siri rite uru na ndị ahịa. Ọzọkwa, akaebe ndị a na-enyere ndị ahịa ọhụrụ aka ịtụkwasị ika gị obi.
Iji ọdịnaya sitere na onye ọrụ na-enye ndị ahịa na-anụ ụtọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị atụmanya gị. Nke a na-arụ ọrụ nke ọma n'etiti mgbasa ozi ọwara ma na-atụgharị ndị nwere ike ịzụ ahịa na ngere.
Jiri nzuzo ụlọ ọrụ mgbasa ozi
Ọ bụrụ na ịmechara n'echiche okike na mmalite mgbasa ozi ahụ, ị ​​dị mma ijide n'aka ndị ọrụ. Ma, olee maka ọnụ ahịa ahịa na ngbanwe? Ọ bụ ihe dị mkpa ịkwanye ahịa wee nweta ọtụtụ clicks na-etinyeghị ọtụtụ awa.
Ị niile kwesịrị ịhazi mgbasa ozi maka oke ahịa. Enwere otu usoro nke ndị na-edegharị akwụkwọ mgbasa ozi tụkwasịrị obi kemgbe ọtụtụ afọ iji mee ka atụmanya bụrụ ndị na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ mgbe niile. A na-akpọ usoro a AIDA, nke na-anọchi anya anya, mmasị, ọchịchọ, na omume. Ị nwere ike iji usoro a iji mepụta scripts vidiyo wee nweta ọtụtụ clicks na-akpaghị aka na-etinyeghị oge na-akụ isi gị n'ahụ mgbidi.
Mgbe ị na-eme mmepụta vidiyo, ma ọ bụ vidiyo mgbe niile ma ọ bụ ihe nkiri, ị ga-enwerịrị mmasị nke onye na-atụ anya ya, jigide mmasị ahụ, wulite agụụ maka ngwaahịa ndị ahụ wee kpalie ha ime ihe. Usoro ndị a ga-ahụ na mgbasa ozi ahụ ka dị mkpa, na-etinye aka, na gbadoro anya ntughari.
Oge mgbasa ozi vidiyo gị
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekiri mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ha na-ahụ ha na-atọ ụtọ mana ha na-amapụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na mgbasa ozi ahụ adịte aka. Ya mere, zere ịtụgharị mmeri gị ka ọ bụrụ akwụkwọ akụkọ. Debe mgbasa ozi vidiyo dị mkpụmkpụ na ụtọ n'ihi na ọtụtụ mgbasa ozi vidiyo ịntanetị dị 30 sekọnd ma ọ bụ obere.
Mgbe ị na-emepụta vidiyo, debe ogologo ogologo a n'uche gị ka ị na-emepụta edemede maka vidiyo ahụ. Agbanyeghị, vidiyo ndị toro ogologo na-arụkwa ọrụ, mgbe ị na-emekọ ihe maka itinye akara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-akọwa ahụmịhe ma ọ bụ akụkọ gbasara ika gị nke gosipụtara onye ahịa ma ọ bụ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ, vidiyo ogologo dị mma.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ dị mkpa ịhapụ ọdịnaya adịghị mkpa na nke na-adịghị mkpa. Ọzọkwa, gbalịa ịgbasa ozi gị ngwa ngwa o kwere mee ka ndị na-ekiri na-ekiri na itinye aka. Ogologo mgbasa ozi vidiyo gị ga-emerịrị hụ na ndị ahịa ahụghị ya ka ọ dị nro na enweghị mmasị.
Tinye oku na-eme ihe
Ma ọ bụ vidiyo gị ma ọ bụ akụkọ na-agbakwunye oku ime ihe na-ekere òkè dị ukwuu n'ịgwa ndị mmadụ ihe ha ga-eme. Iji oku ime ihe (CTA) na-eme ka ndị mmadụ nwee mmụọ mmụọ site na ọdịnaya ahụ ma nyere ha aka ikpebi ma ọ dị mma ịzụta ngwaahịa a.
Oku ime ihe nwere ike ịbụ nkwupụta ma ọ bụ okwu ole na ole na-enyere ndị ọrụ aka ime ọzọ ozugbo ha lechara mgbasa ozi ahụ ma ọ bụ gụọ akụkọ zuru oke.
Ọzọkwa, ebumnuche mgbasa ozi vidiyo ọ bụla bụ ịgba ndị na-ege ntị ume ime ihe ụfọdụ. Oku ime ihe (CTA) nwere ike ịse onyonyo ma ọ bụ tinye ya site na ederede na eserese.
N'ezie, ọ kacha mma iji oku mee ihe na njedebe nke vidiyo. Dịka ọmụmaatụ, iji gosi ndị ahịa gị, ha nwere ike ịga na ibe gị ma ọ bụ webụsaịtị maka nkọwa ndị ọzọ, debanye aha maka mbelata na azụmahịa, ma ọ bụ zụta ngwaahịa na ọrụ gị.
Mgbasa ozi vidiyo aghọwo ngwá ọrụ kachasị ike na-eme ka ndị ahịa gị jikọọ na ika gị. N'ikwu nke ahụ, ịmepụta vidiyo, nkenke na nke na-adọrọ mmasị dị mkpa. Ndị mmadụ anaghị ahụ ihe niile ị biputere na nyiwe mgbasa ozi ọha na eze, ha na-enyocha ọdịnaya kacha emetụta, ma a bịa n'ihe gbasara mgbasa ozi, ha na-ahọrọ nke kacha amasị. Ịre ahịa vidiyo dị irè na-eme ka ị nweta ndị ahịa, ịba ụba ahịa na njirimara ika. Ya mere, a ghaghị ime mgbasa ozi vidiyo mgbe ị tụlechara ndụmọdụ ndị a tụlere n'isiokwu ahụ.
Tags: nnwetaọnụego mgbanwe mgbasa oziụlọ ọrụ mgbasa ozinyeerebrandmgbanwe ntụgharịmgbanwemụbaa mgbanwe mgbasa oziogologo vidiyoetiti foneelungagharị rọketinkwado mmadụtestimonialsuGCihe njirimara nke onye ọrụmgbasa ozi vidiyovideo mgbasa ozimmepụta vidiyooge vidiyo
Daniel Salikov bụ onye isi ahịa ahịa na Ntugharị roket, Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-elekwasị anya na ịmepụta nkọwa na vidiyo azụmahịa maka mmalite.
Retina AI: Iji Amụma AI na-ebuli mgbasa ozi ahịa ma guzobe uru ndụ ndị ahịa (CLV)
Otu esi eme mkparịta ụka nke ọma na ndị na-emetụta ya